Taariikhda My Butros » 5 Sababaha Maxaad Taariikhaha Quraac First mawhibo
Last updated: Jan. 27 2021 | 2 min akhri
Waxa ay cadaadis hoose:
Kulan oo aroortii ka dhigan tahay in laga filayo ee "halista ah" ee taariikhda noqon kartaa sida ugu yar intii suurto gal ah labada dhinac. Waa arrin aan suurtagal in qof idinka mid ah dareemi doonaan haday aad xishoodo ama is miyir qabo in bubbling ah, makhaayad quraac diiradda-, sida munaasabadda aad u of quraacda waa mid ka mid in uu dhaqan ahaan u yeeshaan amarkooda, furaha hooseeyo. Si kastaba ha ahaatee, Si ka duwan oo kaliya kulan ee kafeega, quraacda taariikhaha by default siin dheeraad ah oo la dhisay-in fursado aad ku baranayso ah adal ee qofka kale. Laga soo bilaabo barashada haddii ay jecel yihiin yanyada on ukunta si ay u sida ay dareemaan ku saabsan canjeelada vs vafler, taariikhaha quraac siiyaan fudud "u tag-to" mawduucyo wada hadal markii idin ka fikiri karto wixii ay ku odhan.
Waxaa jira filasho ma jiraan ka dib dhacaya
Ha ahaato yaabeen haddii waxaa jiri doona martiqaad ay taariikhda ee guri ama habeen baxday sahamin magaalada wada, taariikhaha casho waxaa inta badan la socda iyadoo la hubin ah oo ku saabsan sida / marka dhab ahaan habeenkii uu ku dhamaan doono. Iyadoo taariikhaha quraacda, Dhanka kale, dhammaadka wakhtiga noqon kartaa in si sahlan loo qorsheeyey ka hor-. Dhab ahaantii, oo waxa uu xitaa qeyb ka mid ah aasaasidda markii ugu taariikhda bilowga ah waxay noqon kartaa. Tusaale ahaan, talinaya in taariikhda quraacda ee 9ka ah ayaa laga yaabaa sidoo kale in uu la socdaa aan joogtada ah, "Waxaan heystaa ciyaarta golf la qorsheeyey 11;"Sidan, labadaba aad tahay taariikhda yihiin in-ay-ka ogaato sida dheer taariikhda socon doono. Intaa waxaa dheer, hadlayaan mid kasta oo ka qorshahaaga maalinta inta ka hartay wuxuu noqon karaa mid kale oo fudud "u tag-to" mawduuc wada hadalka inta aad chomp hoos ku buskud iyo maraq.
Waxay leeyihiin ah xeerka labiska si sahlan loo tiradaasi-baxay
Doorashada kooxda ah ee taariikhda ugu horeysay noqon kartaa si xoog ah dareemayaasha sugeyso badan doorashada waxyaabaha aad ka labis waraysi shaqo. Dareenkaa u horeeyaana waa muhiim, laakiin ay xaliyaan sidii ay dressy ama aan joogtada ahayn in aad u a shukaansi koowaad waa in inta badan waa sababta stress rabin dhammaan dhinacyada ku lug leh. Iyada oo quraac, Si kastaba ha ahaatee, labisto si baaxad leh waa hubaal ka mid ah su'aasha. Inkasta oo muujinaya kor dhidid iyo a t-shirt arkaa inaanay qorshe wanaagsan midkood, taariikhaha quraac weli by default qeexin dabacsan a, aan joogtada ahayn (laakiin la soo bandhigi karo) xeerka labiska.
Waxay noqon kartaa mid qaali
Si ka duwan taariikhda casho meesha biilka fidin laga yaabaa in appetizers in cabitaanka si wajiha in ay macmacaan ah, taariikhaha quraac yihiin ku dhowaad hubto in quruxsan xad la awoodi karo goobaha ugu badan. Sure, ka mid noqon kara ku amro kafeega ama orange juice ama maciin bidi lahaayeen kooxda salad midho ah halkii browns hash u-socodka si biil, laakiin guud, waa taariikhaha quraac quruxsan tahay in la saadaaliyo qiimaha fudud. Tani waa gunno labalaab ah adiga iyo taariikhda labada: Waxaad tegi maayo xoogan taariikhda la filayo xun ugu horeeyay, oo isagu / iyadu ma dareemi doono xun oo ku saabsan aad faqri wadarta guudba inuu isaga ku qaabbilo / iyada.
Waxay tahay waxa heysata samayn ...
Waayahay, si taas ka mid noqon karaan xoogaa ah stretch a, laakiin cilmi baaris ayaa muujinaysa in cunista quraac caafimaad leh oo ku beegnaa joogto ah waxa uu la xidhiidhaa caafimaadka guud oo ka fiican iyo fursad kordhaysa oo ah inay awoodaan inay gaaraan gool miisaan lumis. Dhab ahaantii, mid ka mid ah "talooyin fiican" ee is bilaabay Safar ah miisaan lumis guul waa inay cunaan quraac maalin kasta. Tani waa sababta cunidda quraacda hab macaan si aad u bilowdaan maalin ma aha oo kaliya, laakiin waxa ay sidoo kale hab boosaska bilaabi aad shiid baxay hab soonka la dilayay. Si fudud, inay quraacda Yeedha taariikhda waa hab fiican oo in la yidhaahdo, "Hey, Waxaan ahay qof xannaaneeyo oo ku saabsan caafimaadka, oo aan kaliya adaa leh oo ku saabsan daryeelka laga yaabaa in aad!"